Author: Gardashura Dairg
Madaxwaynuhu wuxuu xilkiisa u fulin doonaa si waafaqsan Dastuurka iyo xeerarka kale ee dalka u degsan. Guddida Cadaaladdu waxay u xil-saaran tahay: Golaha Wakiilada ayaa oggolaanaya gelidda kharash kasta oo aan miisaaniyadda ku jirin. Mashruuc-sharci waxa uu xeer ku noqonayaa ansixinta Golaha Wakiilada waxaanu dhaqan gelayaa ka dib marka uu Madaxweynuhu saxeexo sida ku cad Qod. See more of Iftiin Organization on Facebook. Maxamadda Sare waa hay’adda ugu sarraysa Garsoorka; isla markaana waxay tahay Maxamadda Dastuurka.
Maamulka dugsiga ayaa u asteeyey in 12 iyo 13 bisha Afraad qabshada bandhigaas, wuxuuna u furan yahay inay ka soo qayb galaan dhamaan bulshada Soomaaliyeed ee danaysa Hiddaha iyo dhaqanka.
Gudiga Nabadgalyada Gobolka ayaa shir leh ay ku xoojinayaan amaanka. Sharci gaar ah dsatuurka laga soo saarayaa Heesta Qaranka. Soddon 30 maalmood gudohood marka Golaha Wakiiladu ansixiyaan magacaabidda Wasiir ama Wasiir-ku-xigeen, waxa xilka u dhaarinaya Guddoomiyaha Maxkamadda Dastuukra iyada oo uu goob joog yahay Madaxweynaha ama Madaxweyne-ku-xigeenka, haddii uu Madaxweynuhu ka maqan yahay dalka ama uu buko.
Maamulka gobollada iyo degmooyinku waa qayb ka mid ah Maamulka Xakuumadda Jamhuuriyadda Somaliland. Qaabilaadda diblomaasiyiinta shisheeyaha iyo ka qabashada waraaqaha aqoonsigooda Credentials. Golaha Wakiiladu waa xubno ka wakil ah dadweynaha; waana Qaybta laad ee Xeer-dejinta dalka, ansixinta xeerarka, oggolaanshaha iyo ilaalinta siyaasadda guud ee hoggaaminta dalka.
Ugu dambayn Ha ogaadaan Xildhibaanada sharaxta leh ee gobolada Bari iyo Nugaal in uusan Said Dani u ahayn Puntland iyo shacabkeeda tixgelintii ay ka mudnaayeen, maantana uusana istaahilin inay codkooda siiyaan. Waxa reebban in qofka lagu dirqiyo qirasho dembi, marag furid, ama dhaar.
Masuuliyiinta Qaranka ee Dastuurku waajibiyay in la ansixiyo, si ku-meel gaadh ah xilka uma hayn karaan muddo ka badan saddex bilood. Garsoorku waxa uu awood gaar ah dastiurka leeyahay: Magacaabidda Xubnaha Guddida Culimada.
Xukun dembi ah oo xilka lagaga xayuubiyay. Kala xadaynta awoodaha saddexda waaxood waxay noqon doonaan sida uu Dastuurku dhigayo. Said dani waa danayste aan mudnayn in la doorto ee ay tahay in qori dheer la isaga qabto.
Qof kasta wuxuu xaq u leeyahay inuu dacwad xeerka waafaqsan ka furto maxkamadda awoodda u Pentlwnd.
Nin dalkiisa jeceloon katagin dibadna aan aadin Nin dadkiisa taageera oo daacad ugu hiisha Nimaan doorin dhaqankiisa oo diinta u adeega Nin difaaca shacabkoo ka jira daalinkiyo tuugga Nin midnimada doonnoon sinaan sina u diidaynin Ducaqabe lawada aaminoo dux iyo iimaanle Duqowdiyo waxgaradkuba nimeey aad u darajayso Diiwaanka ceebbeed nimaan dacal ka suuraynin.
Kala sarraynta iyo takoorka ku salaysan issirka, abtirsiga, dhalashada iyo deegaanku waa reebban yihiin, isla markaa barnaamijyada lagu cidhib tirayo dhaqamada xunxun ee jireenka ah waa waajib Qaran. Cutubka 15aad Sugidda Nabadda iyo Ammaanka Qaranka. Inuu leeyahay aqoon heer jaamacadeed ah amaba wax u dhigma oo dhinaca Diinta ah. Curinta, dhaafidda iyo wax ka beddelka cashuuraha iyo wixii takaaliif ah ee kale xeer ayaa jidaynaya.
Daawasho wacn Plz shar By yacmale. Bixinta astaamaha xurmo iyo sharaf ee ay ka mid yihiin billadaha. Haddii Golayaasha Baarlamaanku fadhiyaan marka uu xeerarka degdegga ah soo saarayo Madaxweynuhu, waa inuu ugu gudbiyo muddo toddoba 7 maalmood gudahood ah si ay go’aanno uga gaadhaan.
Xaalada Bosaso ayaa hada degan noloshuna si caadiya ayay usocotaa. Xubinta Golaha Wakijiada uma bannaana in ay qabato xii kale oo Dawladeed, iyadoo xilkii loo doortay haysa; umana bannaana inay uga faa’iideysato xilkaasi dano gaar ahaaned.
Ma cisub in loo magacaabo xilka Guddoomiyaha Maxamadda Sare qof aan buuxin shuruudaha hoos ku sheegan: Xeerka ayaa caddeynaya ciqaabta ka dhalan karta gudasha la’aanta waajibaadka ku xusan faqradda laad, 2aad, 3aad iyo 4aad.
Previous post Previous LESZEK DO EGZORCYZMY PDF
Next post Next ELISABETH HAICH SEXUELLE KRAFT UND YOGA PDF